Ngasentla, ukuthengisa, kunye namathuba okuThengisa emazantsi oPhuhliso lweShishini | Martech Zone
Ukuba ubuze uninzi lwabantu ukuba bafumana phi abaphulaphuli, uya kufumana impendulo encinci. Uninzi lwezinto zentengiso kunye nentengiso zinxulunyaniswa nokukhethwa komthengisi we uhambo lomthengi… Kodwa ngaba sele kusemva kwexesha kakhulu?
Ukuba ukhona ukubonisana ngotshintsho kwidijithali ngokuqinileyo; Umzekelo, unokugcwalisa zonke iinkcukacha kwiphepha elibonisa ukuba ujonga nje amathemba akho ngoku kunye nokunciphisa umda kwizicwangciso onazo. Unokwenza uphando lwamagama aphambili kwaye ujolise ingqalelo kwiinjini zokukhangela zabo bafuna abasebenzisi iarhente yenguqu kwidijithali, Umcebisi weqhinga ledijithali, ukuphunyezwa kweshishini, Njl
Ukuhambisa phezulu kuhambo lwe-B2B yokuthenga
Ayisiyiyo yonke eyakho abantu ekujoliswe kubo. Ikwa malunga nabathengi bakho bangoku, imisebenzi yakho ethembekileyo, kunye nomsebenzi wabo osezantsi.
Ukubuyela umva kumzekelo wenkampani yotshintsho lwedijithali. Ukuba inkampani ifumana inkxaso-mali ebonakalayo yokunyusa umbutho wabo… inyathelo eliphambili kule nkqubo kukutyala imali kutshintsho lwedijithali. Okanye, ukuba abasebenzi abaphambili batshintshiwe ngaphakathi kwintlangano, ubunkokeli babo obutsha banokufuna ukuguqula amava abo abathengi.
Ke, ukuba ndiyinkampani yenguqu yedijithali, yeyona nto ndinomdla wayo ukwakha ubudlelwane neenkampani ezihamba phezulu. Oku kunokubandakanya:
IiNkampani zeVenture Capital -Ukubonelela ngentetho kubathengi be-VC iya kuba yindlela elungileyo yokwakha ulwazi kunye nokufundisa abathengi abanokuba ngabathengi.
Ukudibana kunye neeFemu zokuFumana -Ukubonelela ngophando kunye nemfundo kwiifemu ze-M & A kuya kuba kufanelekile. Njengoko bedibana kwaye befumana abathengi, baya kuba nemingeni yokubeka amava abo kwidijithali.
Amagqwetha kunye nabaGcini zincwadi Elinye lamanyathelo okuqala elithathwa ziinkampani njengoko zikhula kukusebenza nabameli bezomthetho nabezemali.
IiFemu zokugaya abantu -Amashishini akhulayo okanye anengeniso kwizikhundla zobunkokeli ahlala esebenza neengcali zokugaya abasebenzi ukuzisa italente kumbutho.
Luhlobo luni lwamashishini onokuthi uhlangane nawo anyukayo abaxhamli beenkonzo zakho?
Ukubonelela ngeeNkonzo ezongezelelweyo kubathengi bakho bangoku
Owona myalezo uphazamisayo ukuva umthengi uthi, "Besingazi ukuba inkampani yakho ikunike oko!" emveni kokuba uve iindaba zokuba basayine ikhontrakthi nenye inkampani.
Inyathelo elibalulekileyo lokukhwela kumxhasi wakho kukunxibelelana nazo zonke iimveliso, iinkonzo, kunye namathuba amaqabane anokubanika ishishini lakho. Kuba sele unobuhlobo obusekwayo nenkampani, inokuba sele idwelisiwe kwiinkqubo zazo zobalo lweentlawulo, sele uzibekiwe ngokutsha izivumelwano zakho zeenkonzo… kuhlala kulula ukwandisa ubudlelwane onabo kunye nabo.
Ukusebenzisana neminye imibutho oyithembileyo kuhlala kulithuba elihle lokwakha ixabiso kunye nokuqhuba ingeniso. Sinokudibana nokudibana neenkampani ezininzi esaziyo nesizithembayo zokwenza umsebenzi omkhulu kubaxhasi bethu. Isicwangciso esiphumelelayo kubo bobabini abathengi bakho kunye nokuphuma kwemali.
Zeziphi iinkampani zamaqabane ozaziyo kwaye ozithembayo onokuthi ubazise abathengi bakho? Ngaba unayo izivumelwano zokudlulisa kunye nabo?
Ukuba sisixhobo esisezantsi kubathengi bakho bangoku
Emva kokugqiba ukuphunyezwa kwethu kunye nabaxumi, bahlala benxibelelana nomnikezeli wesoftware ukuba bathethe kwiinkomfa, bathathe inxaxheba kudliwanondlebe, kwaye bacatshulwe kupapasho lushishino.
Ngenxa yokuba ubonelele ngamava agqwesileyo kumthengi wakho, thatha ixesha lokudibana nabo kumathuba okwazisa. Inkampani yakho yobudlelwane noluntu ifanele ukuba isebenzele ukufumana amathuba okuthetha kwaye iqela lakho lokuthengisa kufuneka libancede babhale amanqaku obunkokeli ocinga kwiindawo zamashishini.
Njengoko befumana loo mathuba, kuyindalo ukuba inkampani yakho ikhankanywe kumxholo womxholo abawunikayo. Kuba abaphangeli kuba khange uhlawule by wena, bathetha nabaphulaphuli njengegunya kunye nomlingane othenjiweyo. Olu hlobo lokukhuthaza abathengi luya kuqhuba ulwazi olumangalisayo ngomsebenzi owenzayo.
Ungabanceda njani abathengi bakho ukuba babhengeze impumelelo yabo ekusebenzisaneni nawe? Zeziphi izixhobo onokuthi ubanike zona kule nkqubo ukuqhubela phambili ulwazi kwishishini lakho?
Kutheni ubalekela kwindawo enye bonke abakhuphisana nabo? Qalisa ukusebenza ukunyusa, ukuhla kunye naphambi kwabaxumi bakho bangoku ukuqhuba umsebenzi omninzi kumgca wakho osezantsi.
tags: b2bUkufaka uphawuuhambo lwabathengiuyilongaphantsiintengiso esezantsiurhwebo inboundIiNkomfa zeNtengisoUkuThengiswa kweMfono kunye neThebhulethiapps mobilezokunxibelelanaintsebenziswanoinethiwekhi yokuncokolaiimpawu zorhwebophezuluintengiso ephezuluwebinar
I-Sqribble: Cofa, uyile, kwaye upapashe iiNcwadi zeeNcwadi zaKho, iZifundo eziNzekayo, okanye iiPhepha eziMhlophe kwiMizuzu